DAAWO WARBIXIIN KU SAABSAN BULSHO DAYACAN ( Q.2aad) | SMC
Home WARARKA MAANTA DAAWO WARBIXIIN KU SAABSAN BULSHO DAYACAN ( Q.2aad)
DAAWO WARBIXIIN KU SAABSAN BULSHO DAYACAN ( Q.2aad)
Waxaanu kasi amboqaadeynaa qormadeeni maqaalkii aanu ugu magac darney Bulsho Dayacan sida dhabta ah dhacdo kasta waxaa lagu keydiyaa taariikh xasuuseed taasoo ahaan doonta markhaati. Habdhaqab siyaasadeedka Soomaalda ayaa waxaa sida badan ka marneyn nin jecleysi iyo kooxeysi ama qaraabinimo taasoo meesha ka saareysa hankii dhalintii wax usoo baratey dalka oo aheyd in loogu faaideeyo aqoontooda, hadii sidaasi la yeelin waxan oran karnaa Hogaanka xili walba ha jiree waxuu dayaceyaa waa Bulsho horumarkeedii iyo mustaqbalkeeda. Waxaa isxigxigey burburkii Dowladii dhexe ka dib dowlado ku meel gaar ah ilaa aanu dib ugu soo laabatey aqoonsi Caalami ahna Dowlada Fediraalisim ah taasoo maanta uu Hogaanka u hayo Md Mohamed Abdullahi Formaajo .
Waxaa isweydiintu tahay Bulsho Dayacan ma iyagaa is dayaca mise Madaxda ayaa dayaca? Waxaa laga yabaa inuu qofba jawaabta meel la`aado sidaa awgeeda qeexitaanka magaca maqaalkeena ayaa noqon doona mid dood wejiyo badan yeesha taana waxaan u deynayaa akhristayaasha !! Waxaa qiimeyn u baahan siyaasiyan bulsho walbo sida ay uga falciliyaan hadba waxa ay la tahay in looga gubi karo dayacnaan qormadu waxaanu si toos iyo si dadban ugu iftiimin doona kuwa si gaar ah ugu dayacan dhan walba gudaha dalka la soco qeybaha dambe.
Qalinkii Okasha ukash37@gmail.com
Previous articlePuntland oo dib u fureysa Maxkamaddaha
Next articleKhasaaraha ka dhashay qarixii ka dhacay duleedka Muqdisho oo la shaaciyay